Ipie ye-Android ayiveli kulwabiwo lukaSeptemba lwe-Android | I-Androidsis
Ipie ye-Android ayibonisi ngoSeptemba idatha yokuhambisa i-Android
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo idatha yosasazo ye-Android yenyanga ka-Agasti yapapashwa. Kulenyanga sikwazile ukubona ukuba u-Oreo uqhubeka njani nokukhula, nangona kuhamba kancinci, kwaye oko I-Android Pie ibingekenzeki ukubonakala kuluhlu. Khumbula ukuba kufuneka ube ngaphezulu kwe-1% ukuze ubonakale kuyo. UGoogle ngoku wabelana ngedatha yenyanga kaSeptemba.
Kwaye kuzo, okwangoku azikho iindaba zePie ye-Android. Inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza ayikabikho kuluhlu njengoko ingakhange ikwazi ukufumana i-1% efunekayo. Ngeli xesha, uNougat uyaqhubeka nokulawula uluhlu.
Inyani yile yokuba akukho lutshintsho xa kuthelekiswa namanani apapashwe yinkampani kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Kuyo sinokubona oko INougat ihlala kwindawo yokuqala, kunye nesabelo se-30,8% ukuba sidibanisa iinguqulelo ezimbini zenkqubo yokusebenza. Zonke ezinye iinguqulelo zihlala zinjalo.
Lo nto Kuyamangalisa ukuba uGoogle akhuphe le datha kwiiveki nje ezimbini kamva ukusuka kulwabiwo luka-Agasti, njengoko kungekho tshintsho. U-Oreo uyaqhubeka nokukhathazeka malunga nenkqubela phambili ecothayo kwintengiso, kuba yeyona nguqulo yesine isetyenzisiweyo, ngelixa i-Android Pie ingabonakali kuluhlu.
Ukuqala ngo-Okthobha kunokwenzeka ukuba sibone ezinye iifowuni zihlaziya kwi-Android Pie kwintengiso. Oku kufanele ukuba kube yinyuselo kolu hlobo lwenkqubo yokusebenza kwaye kuya kufuneka sibone isabelo sayo sentengiso sikhula. Kodwa kukho inkxalabo malunga nokucotha okuza kuthi kusetyenziswe.
Sikwazile ukuyibona kunye no-Oreo, emva konyaka ingekho kwiifowuni ezininzi, ke okufanayo kunokwenzeka ngePie ye-Android. Siyathemba ukuba siza kuba neendaba malunga neemodeli eziza kuhlaziya kule nguqulo kungekudala. Ucinga ntoni malunga nolwabiwo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Ipie ye-Android ayibonisi ngoSeptemba idatha yokuhambisa i-Android